musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » India Kupwanya Nhau » Kerala Tourism: Chenesa Chaliyar Rwizi Paddle Zvino
Kufamba kwekushanya • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Hospitality Industry • India Kupwanya Nhau • nhau • Kutarisirwa • Sustainability News • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Kerala Paddle Chiitiko
Iyo yechinomwe edition yeChaliyar River Paddle ichaitwa muKerala, India, kubva munaNovember 7 kusvika 12, 14, ine meseji yekuenda "plastiki isina kunaka."
Chiitiko chemazuva matatu chekupakata chakarongedzwa neJellyfish Watersports mukubatana neKerala Tourism inosimudzira chiitiko che eco-chinoshamisira chemvura chinobatanidza vadiki uye vakuru.
Iyo 68-km paddle ichatanga kubva kuNilambur, iri mujinga mezvikomo zveWestern ghats muMalappuram.
Ichaperera paBeypore mudunhu reKozhikode, panosangana rwizi neGungwa reArabia.
Zvirongwa zvekuchengetedza zveCOVID zvichateverwa muchiitiko ichi uye chitupa chekudzivirira cheCOVID chinodikanwa chekutora chikamu muchiitiko ichi. Gore rino, zvakapihwa mamiriro, chiitiko ichi chinosimudzirwa sechiitiko che phoenix kusimudzira zviitiko zvekushanya muKerala. Chiitiko ichi chinopa rwendo, musasa, uye sosi kune ruzivo rwegungwa, uchishandisa kayaks, SUPs, rafts, uye gore rino pazuva rechitatu, varongi vari kuunza sculling (vafambisi) uye zvikepe zvengarava zvichiita kuti zvive zvakasiyana siyana isina-mota, inofambiswa nevanhu-ngarava yemvura yakashandiswa - chimwe chinhu chitsva kutarisira mberi uye kusangana nacho.
Iyo Chaliyar Rwizi Paddle inopa mikana pamatanho akasiyana-siyana kubva kune vanotanga kusvika kune vasiri-kushambira kune vakanyatsosimbiswa vemitambo yemvura vanofarira, vanoda zvisikwa, vashanyi, vana, uye vanhu vanobva kwakasiyana siyana. Chiitiko ichi chinosimudzira nzizi dzeKerala, runako rwavo, chikafu cheMalabar chechokwadi, uye chinopa mukana wakasarudzika wekusangana nevanhu vane pfungwa dzakafanana. Mabhendi emumhanzi emuno achange achibatana maoko kusimudzira tarenda ravo uye kupa zororo remanheru kune vanokwasva. Chikafu chinozopihwa neakanakisa maresitorendi emuno akadai seCalicut Paragon.
"Chaliyar River Paddle yanga yakatarisana nekuchengetedza nzizi dzedu kubva mukusvibiswa kwemaguta uye kusimudzira [ku]nhandaro kayaking kune wese munhu. Icho chiitiko chepurasitiki chisina kunaka, saka vafambi vanobatsira kuchenesa rwizi vachiri kayaking. Takabatana neNGO yemuno iyo ichazopa vatori vechikamu iyi bhegi rekutakura uye voendesa marara kunzvimbo yavo yekugadzirisa marara uye yekurasa marara. Ivo zvakare vachadzidzisa vatori vechikamu pane zvakakodzera rusarura, zvine mutoro kunwa, uye marara manejimendi. Zvose ndezvekuwana Kerala kushanya chikamu chekudzoka kubva kudenda re COVID pamwe nekuparadzira ruzivo nezve nharaunda uye kunyanya kusvibiswa kwepurasitiki kuri murwizi, "akadaro Kaushiq Kodithodika, Muvambi weJellyfish Water Sports.
Rumwe ruzivo, kusanganisira chiitiko chekunyoresa ruzivo, chinogona kuwanikwa pano.